Kedu otu esi ahọrọ igwe na-ere ahia? -Company News-Hunan Zhonggu Science and Technology Co., Ltd.
Kedu otu esi ahọrọ igwe mgbere?
Echiche:30 Banyere chepụtara: Kwusaanụ Oge: 30 si:
Ọtụtụ ndị ọrụ nwere mmasị na ụlọ ọrụ na-ere igwe. Anyị nwere ike ịhụ ya ebe niile na nnukwu ụlọ ahịa, ogige ntụrụndụ, ụlọ akwụkwọ na ebe ndị ọzọ. Mana enwere ọtụtụ ndị na-ere igwe na-ere ahịa n'ahịa. Esi họrọ?
1kwụ na XNUMXkwụ XNUMX: The Basic Indicators nke Vending Machines
Ihe ngosi nke igwe na-ere ahia gunyere: odidi anya, ibu nha, ihe akụrụngwa nke akụrụngwa igwe, ike, nọmba ohere, ikike nnweta, ngwa ahịa ngwa ahịa bara uru, wdg. Ngosipụta kachasị eleghara anya bụ ihe achọrọ iji tinye igwe. Ọ gaghị ekwe omume ịchọta n'èzí ma zụta akụrụngwa ime ụlọ.
Nzọụkwụ 2: Ngosipụta Ngosiputa Ngwa igwe
E nwere isi ihe abụọ: 1. Ndụ nke igwe ahia niile 2. XNUMX.kpụrụ maka mmebi mmepụta (ma ngwaahịa nwere asambodo sistemụ dị mma)
Nzọụkwụ 3: Njikọ na Mmepụta
Mmepụta na njikọta njikọ na-adaberekarị na nkwupụta, mbido, okirikiri ọkọnọ, ikike nke obere na nke pere mpe iji ngwa ọrụ, ikike teknụzụ na ike R&D ngwaahịa ọhụrụ, yana ikike inweta ọrụ izizi mbụ. Ike ịnye ọrụ na ike nkwado ọrụ nke mbido mbụ dị ezigbo mkpa, nke chọrọ nghọta zuru oke na ozi ziri ezi.
Nzọụkwụ 4: Ọrụ arụmọrụ nke igwe na-ere ahịa
Ihe ngosi nke akụrụngwa ọrụ arụmọrụ, ọdịdị anya nke igwe, ezi uche nke usoro, mgbagwoju anya nke mmezi kwa ụbọchị, nsogbu nke iji usoro oghere, ọnụọgụ akụrụngwa, ịdị mma nke ngosi, mmetụta nke ngwaahịa, mmetụta nchekwa ọkụ na ihe ndị ọzọ. anya na. Ọrụ arụmọrụ nke igwe bụ usoro kachasị sie ike ma dị egwu na nhọrọ nke akụrụngwa. Anyị ga-akpachara anya gosi njirimara igodo ọ bụla.
Kwụ na Thekwụ 5: The emepe ikike nke Vending Machine System
Isi ihe ngosi nke ikike mmeghe nke usoro: ụdị data nke nwere ike ịpụta, ụdị nke usoro / usoro ụgbọ njem, ma a kwadoro nkwado ntanetị, ma ọrụ sistemụ na-akwado mgbasa ma ọ bụ ndakọrịta nke mgbakwunye ngwaọrụ.
Nke mbụ: Zoomgu na-agbasi mbọ ike iji lụso “ọrịa” ọgụ !!!
Ọzọ: 30 igwe na-ere ahia di iche iche n'uwa, odi mgbe eji ya?